MINISITERAN’NY MPONINA: Notsinjovina manokana ireo fianakaviana sahirana | déliremadagascar
Socio-eco	 16 mai 2019 lynda
Hetsika maro no tanterahin’ny ministeran’ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy mandritra ity volana mey ity izay natokan’ny fitondram-panjakana ho volan’ny fiahiana ara-tsosialy. Fianakaviana sahirana sy marefo miisa 200 avy ao amin’ny boriborintany voalohany indray no nozaraina vary maimaim-poana ny 15 mey 2019 teny amin’ny fokontany Avara-tetezan’ny Bekiraro Isotry. “Miara-dalana amin’ny fiahiana ara-tsosialy ny fiahiana ny fianakaviana ka izany indrindra no antony nanaovana izao hetsika izao amin’ity androany ity satria andro iraisam-pirenena ho an’ny fianakaviana ny 15 mey”, hoy ny Sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy, dokotera Baraka Charlotte Hanta. Fokontany folo tao amin’ny boriborintany voalohany no nahazo tombontsoa tamin’izany ka vary dimy kilao isam-pianakaviana no nozaraina, araka ny fanampim-panazavana nomen’ny lehiben’ny fokontany Avara-tetezan’ny Bekiraro Isotry, Ravonjiarison Yvonne.
Nosafidiana manokana ireo fianakaviana sahirana sy marefo tamin’ity fizarana vary ity mba ho fitsinjovana ny andavandranom-piainan’izy ireo. Ao anatin’ny politika ankapobeny ny fanjakana ny fiahiana ara-tsosialy ka anisan’ny nanampy tamin’ny fanatontosana ny hetsika ny eo anivon’ny fiadidian’ny repoblika misahana ny raharaha ara-tsosialy sy politika (DASF). Nohamafisin’ny Sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny mponina fa manana zo hilamina ny fiankaviana ka tsy tokony hisy ny herisetra ary mendrika fandrosoana ny ankohonana tsirairay.
DASFministeran’ny mponinany fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy